Mivelatra eo amin'ny sehatry ny asa ny fifandraisana Visual. Martech Zone
Tamin'ity herinandro ity dia tao amin'ny fivoriana roa niaraka tamin'ny orinasa samihafa aho tamin'ity herinandro ity izay ny fifampiresahana anatiny no ifantohan'ny resaka:
Ny voalohany dia i Sigstr, an fitaovana marketing amin'ny sonia mailaka hitantanana sonia mailaka manerana ny orinasa. Olana lehibe iray ao anatin'ny fikambanana ny hoe mifantoka amin'ny andraikiny ny mpiasa ary tsy mandany fotoana hampitana ny marika ivelany amin'ny prospect sy mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny fitantanana sonia mailaka manerana ny fikambanana iray, i Sigstr dia manome antoka fa ny fampielezan-kevitra na tolotra vaovao dia ampitaina amin'ny maso amin'ny olona rehetra mahazo mailaka.
Ny faharoa dia Dittoe PR, ny orinasam-pifandraisana, izay nanakoako ny amin'ny maha-zava-dehibe ny hiahotrahoranareo ao anatin'ny fikambanana. Miaraka amin'ny skotista mpiara-miasa PR am-polony, matetika izy ireo dia mahita fotoana mety amin'ny mpanjifan'izy ireo. Slack dia fitaovana lehibe amin'ny ekipa mampitombo ny vokatra miaraka amin'ny mpanjifany.
Satria manova loharanom-bola bebe kokoa amin'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa sy ny fitazonana azy ireo orinasa, dia mety maniry ihany koa ny hifantoka amin'ny fifandanjana sy ny fanatanterahana ny varotra manerana ny fikambanana. Farafaharatsiny farafahakeliny, ny fizotry ny varotra sy ny varotra… ary misy ifandraisany amin'ny serasera ny rehetra.
Amin'izao fotoana izao ny mpiasa ao amin'ny fiaraha-monina dia zatra mifampiresaka eo no ho eo ary aleony mahazo valiny amin'ny fotoana fa tsy famerenana isaky ny telo volana. Ianaro hoe hatraiza ny herin'ny fifandraisana an-tsary sy ny fomba itarihan'ny orinasa manerantany ny famokarana sy ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fikitihana azy tanteraka.
Dashboard dia singa manakiana ho an'ny fifandraisana anatiny, ny fotoana tena izy ary ny teknolojia bebe kokoa dia mamely ny tsena izay mampiditra fampahalalana marobe amin'ny angon-drakitra anaty sehatra hita maso be. Mitsikera ny maso:
65% ny olona dia mianatra amin'ny fahitana
40% ny olona no mandray tsara kokoa rehefa ampiana sary fa tsy ny lahatsoratra fotsiny
Ny 90% amin'ny fampahalalana ampitaina amin'ny ati-doha dia hita maso
Ny atiny misy sary dia miteraka fifandonana 94% bebe kokoa
Ny 80% an'arivony taona dia aleony mandray valiny amin'ny fotoana tena izy
hoopla dia fitaovana fampielezam-peo fampisehoana hanamafisana ny fifamatorana sy ny fifandraisana amin'ny angon-drakitra mivantana, navoakan'ny mpitarika, gamification ary fankatoavana. Novokarin'izy ireo ity sary ity, Ny fivoaran'ny fifandraisana eo amin'ny toeram-piasana.
Tags: atidohadashboardgamificationleaderboardsfahatsiarovanafankatoavanasigstrhiahotrahoranareofifandraisana an-tsaryfahatakarana masofianarana an-tsarysaryserasera eo amin'ny toeram-piasana